Faroole & Masuuliyin ka socota Talyaniga oo ka hadlay Dhismaha Runway-ga Bosaso – SBC
Faroole & Masuuliyin ka socota Talyaniga oo ka hadlay Dhismaha Runway-ga Bosaso
Posted by Webmaster on Diseenbar 10, 2012 Comments
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole iyo Wefdi ka socda Dowlada talyaaaniga ayaa manta si rasmi ah uga wada hadlay qorsha Bilaabida runway-gaa gaaroonka diyaaaradaha Boosaaso oo dhawaan si rasmi ah u bilaaban doona
Madaxweyen C/raxmaan Faroole ayaa ugu horeyn ka hadlay kulanka oo sheegey in uu muhiim wayn u yahay dhismaha Garoonkaan dhamaan umada Puntlan, Waxana uu aad ugu mahad celiyey Shirkada Dhisaysa Garoonka, waxana madaxwanuhu caracaababey in dawlada Talyaanigu ay mar walba taagero u fidiso Dawlada Puntland ee isagu madaxda ka yahay.
Masuuliyiinta ka socotay Dowlada Talyaaaniga iyo Company-ga Dhisaya Howsha Dhismaha Wadada Diyaarada uu uu horkacayo Gusebo oo ka socday Dowlada Taalyaaniga ayaa goobta ka hadlay.
Waxana uu sheegey in dhismahan uu ka danbeeyey in la dhiso, Cilaaqaadka wanaagsan ee ka dhaxeeya dawlada Puntland iyo hayada fududeysey dhismaha Garoonka oo leh xiriir aad u wanaagsan, waxana Eng hadalkiisa ku darey in goor dhow la soo afjari doono dhismaha garoonkan.
Kulanka oo ka dhacay isla Garoonka Boosaaso goobta Dhismaha laga Sameyn doono ayaa waxaa ka hadlay Cuqaal Waxgarad Ganacsato iyo Masuuliyin ka tirsan Dowlada kuwaasi oo si weyn u soo dhaweeyay qorshahan.
Howsha xilligan la rajenyo In laga bilaabo garoonka diyaaradaha boosaaso waxaa ay fursad u noqoneysa Magaalada Dekada Leh ee Boosaaos oo maadaaba ay Magaalada Boosaaso tahay Magaalo Ganacsi oo Magacweyn leh.
Maxmuud cabdi Saciid Fantastic
Diseenbar 10, 2012 at 4:06 pm
Mansha alaah dalkaygo horay u soco insha alaah aqoosi buuxa nah wad heli donta sana daha sosocda
Puntland Jaceyl says:
Diseenbar 10, 2012 at 7:10 pm
puntland allow dhowr
xaamud sh says:
Diseenbar 11, 2012 at 1:28 am
Waa guul u soo hoyatay Puntland. Halkaas ka dadaalka madaxweyne Faroole iyo guud ahaan dowladda
Maalmaha waxaa iska batay borobogaado lagu wado Puntland, haba ugu horeyso VOAda, oo hada si cad u cadeysatay inay Puntland lid ku tahay, yaab badnaa!
Diseenbar 11, 2012 at 10:29 pm
adeer mesha waxba yaalan awal xoolaha nool ayaa bosaaso ka dhoofi jiray hadana berbara ayaa kala wareegtay qofkii taas cadeyntada raba wuxuu akhrin karaa xoolaha berbera sanadka ka dhoofay iyo kuwo bosaaso ka dhoofay waa kaaf iyo kala dheeri
ma waxa maqquula //////
TO MOHAMED HASSAN says:
Diseenbar 12, 2012 at 10:56 am
LOOL MAXAMED MACQUUL MA AHAN OO 70 MILYAN OO XOOLA AH SOOMALIYA MA JOOGAAN….MARKA WAX MACQUUL AH MEESHA LA IMOOW.